Mutero mudiki kune iyo keyboard. Chinhu chakakanganikwa | Linux Vakapindwa muropa
Mutero mudiki kune iyo keyboard. Chinhu chakakanganikwa
Vashandisi veLinux vapedza makumi emakore vachirwisa maprinta, makadhi evhidhiyo uye makadhi enetiweki. Zvisinei, pane chinhu chisingambokonzeresa matambudziko uye ndosaka tisina kumbotaura nezvazvo. Keyboard
Ndanga ndichinzwa kuti iyo keyboard inozotsiviwa nezwi kana kunyangwe kufunga kubva gumi nemapfumbamwe makumi masere neshanu. Kunyange zvakadaro, ichiri nesu. Kunyangwe muhope idzo dzevaya isu vane minwe gobvu ndiyo chaiyo kiyibhodi yefoni.
1 Mutero mudiki kune iyo keyboard
1.1 Kwakatangira keyboard yedu
1.2 Dzidziso ingangoitika
Mutero mudiki kune iyo keyboard
Akakuvara emvura yekofi, minwe inonamira yevana, kuda kwevatambi kana kutsamwa kwevanyori veemail kana makomenti. Uye, mune dzimwe nguva uine ivhu rakawanda pakati pemakiyi ako kupfuura iyo Humid pampas. Iyo keyboard inoenderera ichishanda kudzamara yamira kushanda uye inotsiviwa neimwe. Kazhinji zvakachipa kupfuura iyo Chinese indasitiri inowanzo kupa.
Kwakatangira keyboard yedu
Vazhinji vedu tinoziva kuti dhizaini yedu yekhibhodi yakagarwa nhaka kubva tapureta.. Izvo zvisiri pachena ndepazvakawanikwa nemataipureta.
Kutenda kwakakurumbira ndekwekuti marongero emakiyi pamatapureta ekutanga aifanira kuchinjwa nekuti kana mushandisi akakurumidza kutaipa akateedzana nemavara ane mabara emhando dzaive padhuze nepadhuze, michina isina kusimba yaizomira.
Zvinoenderana neizvi, iyo QWERTY dhizaini (Yakatumidzwa mavara ekutanga emutsara wekutanga) uyeIyo yakagadzirirwa kuwedzera kupatsanurwa kwemavara akajairika mavara paChirungu.
Vanyanzvi veChirungu vanopokana nedzidziso iyi zvichibva pane er kiyi musanganiswa iri yechina yakanyanya kushandiswa.
Iko kune imwe vhezheni iyo inoda yeakavhurika sosi vanozoiziva nayo. Remington, mumwe wevagadziri vematapureta ekutanga, haana kungogadzira tapureta asi akapawo makosi ekudzidzisa, ayo aibhadharwa zvakasiyana. Ivo vataipi avo vakadzidza nehurongwa hwavo hwepamutemo vaisazobhadhara uye kutora kosi zvakare pavakachinja zvigadzirwa. Izvi zvaida makambani aida kukora typists vane hunyanzvi kuti vatenge zvigadzirwa zveRemington.
Chero kufanana kune zvakaitwa naMicrosoft anopfuura zana ramakore gare gare nemakomputa esainzi zvikoro zvakangoitikawo.
Kunyange zvakadaro, muna 1893, vashanu vashanu vanogadzira tapureta - Remington, Caligraph, Yost, Densmore, uye Smith-Premier- akabatana neUnited Typewriter Company uye akabvuma kutora QWERTY seyakajairwa.
Muna 2011, vaongorori vechiJapan vakauya neinoratidzika kunge ndiyo tsananguro yakasimba yekuti nei mabhatani ekhibhodi asina kugamuchirwa akagamuchirwa.
Vatsvakurudzi vanopa muenzaniso
El Morse kodhi inomiririra Z se '- - -', iyo inowanzo kanganiswa ne SE digram, inowanzo shandiswa kupfuura Z. Dzimwe nguva vanogamuchira maMorse muUnited States havagone kuona kuti Z kana SE zvinoshanda, kunyanya mutsamba (s) yezwi , vasati vagamuchira tsamba dzinotevera. Naizvozvo, iyo S inofanirwa kuiswa padhuze neZ uye E pane iyo keyboard kuitira kuti vagamuchire veMorse vagogona kuzvinyora nekukurumidza (nekuda kwechikonzero chakaita kuti C iiswe padyo neEI). Asi, kutaura zvazviri, C yaiwanzo kuvhiringidzwa neS).
Ndokunge, chinangwa cheQWERTY chaisambofa chakadzivirira zvemakanika matambudziko kana kusunga vashandisi kune imwe nzira yekutaipa kana zvigadzirwa zvekambani. (Kunyangwe ini ndisingafunge kuti maRemingtons ainyunyuta nezve mukana wavakapihwa nevatapwa)
Chero zvazvingaitika, zvakakodzera kuti tizvibvunze kana zviine musoro kuramba tichichengeta iyi gadziriro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mutero mudiki kune iyo keyboard. Chinhu chakakanganikwa
Zvimwe pamusoro pekhibhodi. Chinhu icho chisingarangarirwe nemunhu
Intel yekugadzira yakazara homomorphic encryption chip